Bryan Fuller Waxay Diyaarineysaa Toosinta 'Christine' Cusub ee loogu talagalay Sony, Blumhouse
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Bryan Fuller Waxay Diyaarineysaa Toosinta 'Christine' Cusub ee loogu talagalay Sony, Blumhouse
Warar Naxdin LehFilimooyin naxdin leh
by Waylon Jordan June 8, 2021
Bryan Fuller (Hannibal) ayaa lagu wadaa inuu qoro oo uu jiheeyo nooc cusub oo la qabsashada Stephen King's ah Christine loogu talagalay Sony iyo Blumhouse Studios.
Buugga sheekada King wuxuu diiradda saarayaa nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Arnie kaasoo ku waashay 1958 Plymouth Fury oo uu u soo iibiyey inuu hagaajiyo. Baabuurku wuxuu leeyahay taariikh xun iyo dhadhamin dhiig waxaana ugu dhakhsaha badan u qalooca ninka dhalinyarada ah siduu doono halka laga baabi'inayo cid kasta oo caaya ama isku dayda inay kala saarto.
Buugga waxaa hore u habeeyay John Carpenter oo dib ugu soo laabtay 1983. Aragtida macallinka naxdinta leh ee sheeko-curinta ayaa la timid dhibco dilaa ah iyo weliba dhawaq lama ilaawaan ah oo dhagaxa caadiga ah ee 50s / 60s.
Sida laga soo xigtay Deadline, Jason Blum ayaa soo saari doona filimka hoostiisa calamada Blumhouse oo ay weheliyaan Vincenzo Natali iyo Steven Hoban. Peter Kang ayaa ku celinaya Sony Picture filimka.
Fuller wuxuu ku yimaadaa qaybta leh liistada adag ee shaqada ee noocyada oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan telefishanka-jecel Hannibal iyo Riixida Daacish iyo sidoo kale shaqadiisii ​​ugu horreysay – qaar badanna waxay ku doodi lahaayeen xilliga ugu fiican Ilaah American ku saleysan sheeko uu qoray Neil Gaiman.
La qabsiga cusubi wuxuu ku biirayaa saf balaaran oo balaaran oo filim la waafajinta guryaha King tobankii sano ee la soo dhaafay iyadoo noocyo cusub oo ka mid ah ilayska iyo Firestarter iyo sidoo kale la qabsashada markii ugu horeysay ee guryaha sida Dibedda iyo Sheekada Lisey, labaduba waxay heleen dib u eegis aan caadi ahayn.
iHorror ayaa kuu soo gudbin doonta nooca cusub ee Fuller ee Christine kolba markay diyaar noqdaan. Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka hoose!
BlumhouseBryan fullerChristineJason BlumAdnan BoqorWaylon Jordan
Argagixisada Tightwad Talaadada - Filimo Bilaash ah oo loogu talagalay 6-8-21
Pat Mills, Alyson Richards Ayaa Naga Qaaday Gudaha 'The Retreat' Horror / Thriller